Mwari Akatisika Nechinangwa Chei
SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bété Cambodian Cebuano Chavacano ChiChangana (Zimbabwe) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Futuna (East) Ga German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lambya Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuIvory Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNepal Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuVietnam Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tatar Thai Tigrinya Tiv Toba Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
Mwari Akatisika Aine Chinangwa Chei?
PAUNOVERENGA pepanhau, kana kuona terevhizheni, kana kuteerera redhiyo, unoona uye unonzwa nyaya dzakawanda dzekuparwa kwemhosva, hondo, uye ugandanga. Pamwe iwe pachako une chirwere chiri kukutambudza kana kuti wakafirwa nemumwe munhu wawaida.
Mwari anoda kuona izvi zvichiitika kwandiri nekumhuri yangu here?
Ndekupi kwandingawana rubatsiro rwekuti nditsungirire matambudziko angu?
Kuchazombova nerunyararo rwechokwadi here?
Bhaibheri rinopindura mibvunzo iyoyo zvinogutsa.
BHAIBHERI RINODZIDZISA KUTI MWARI ACHAITA ZVINHU ZVINOSHAMISA PANYIKA.
Vanhu vanenge vasisarwadziwi, kuchembera, kana kufa.​—Zvakazarurwa 21:4
“Munhu akaremara achakwakuka.”​—Isaya 35:6
“Maziso emapofu achasvinudzwa.”​—Isaya 35:5
Vakafa vachamutswa.​—Johani 5:28, 29
Hapana achange achirwara.​—Isaya 33:24
Vanhu vese vari panyika vachange vaine zvekudya zvakawanda.—Pisarema 72:16
BATSIRWA NEZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI
Zviri nyore kufunga kuti zvauchangobva kuverenga zvinhu zvisingafi zvakaitika. Asi Mwari ava pedyo kuzadzisa zvaakavimbisa kuti achagadzirisa panyika, uye Bhaibheri rinotsanangura kuti achazviita sei.
Bhaibheri haringotauri izvozvo chete. Rinotiudza zvatinofanira kuziva kuti tinyatsofara muupenyu uye kuti tinakidzwe neupenyu iye zvino. Chimbofunga nezvezvinhu zvinokunetsa. Izvi zvinogona kusanganisira nyaya dzemari kana kuti dzemhuri, utano husina kunaka, kana kuti kufirwa nemunhu waunoda. Bhaibheri rinogona kukubatsira kutsungirira matambudziko aya, uye rinogona kukunyaradza nekupindura mibvunzo yakadai seiyi:
Tingatsungirira sei matambudziko edu?
Mhuri yedu inogona kufara here?
Pane kwatinoenda here kana tafa?
Tichazomboona vanhu vatinoda vakafa here?
Nei tichigona kuvimba kuti Mwari achazadzisa zvese zvaakavimbisa?
Kuverenga kwauri kuita bhuku rino kunoratidza kuti unoda kuziva zvinodzidziswa neBhaibheri. Bhuku rino richakubatsira. Ndima dzacho dzine mibvunzo ichakubatsira kuwedzera kunzwisisa Bhaibheri. Vanhu vakawanda vari kubatsirwa nekudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha. Tinovimba uchabatsirwawo. Mwari ngaakukomborere pakudzidza kwauchaita Bhaibheri uchiona zvarinodzidzisa!
ZIVA ZVAKAITA BHAIBHERI RAKO
BHAIBHERI rine mabhuku netsamba 66. Bhuku rimwe nerimwe rine zvitsauko nemavhesi. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kutsvaga mavhesi. Kana ukaona paine rugwaro rwakanyorwa mubhuku rino, nhamba inotevera zita rebhuku inenge ichiratidza chitsauko chacho, uye nhamba inozotevera inenge ichiratidza vhesi racho. Ukaona pakanzi “2 Timoti 3:16,” zvinenge zvichireva kuti tsamba yechipiri yaTimoti, chitsauko 3, vhesi 16.
Ukaramba uchivhura mavhesi anenge akanyorwa, uchapedzisira wava kugona kuvhura Bhaibheri. Unogona kutangawo kuverenga Bhaibheri zuva rega rega. Kana ukaverenga zvitsauko 3 kusvika ku5 pazuva, unogona kupedza kuverenga Bhaibheri rese mugore rimwe chete.
Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?—Vhidhiyo Refu
Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?
Zvapupu zvaJehovha Vanhu Verudzii?
Unoziva Zvapupu zvaJehovha zvingani? Chii chaunonyatsoziva nezvedu?
CHITSAUKO 1 Mwari Ndiani?
CHITSAUKO 2 Bhaibheri—Bhuku Rakabva Kuna Mwari
CHITSAUKO 3 Mwari Akasika Vanhu Aine Chinangwa Chei?
CHITSAUKO 4 Jesu Kristu Ndiani?
CHITSAUKO 5 Rudzikinuro—Chipo chaMwari Chinopfuura Zvese
CHITSAUKO 6 Pane Kwatinoenda Here Kana Tafa?
CHITSAUKO 7 Vakafa Vachamuka!
CHITSAUKO 8 Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?
CHITSAUKO 9 Nyika Yava Kuda Kuguma Here?
CHITSAUKO 10 Bhaibheri Rinotii Nezvengirozi?
CHITSAUKO 11 Nei Panyika Pakazara Nhamo Nematambudziko?
CHITSAUKO 12 Ungava Sei Shamwari yaMwari?
CHITSAUKO 13 Koshesa Upenyu Hwawakapiwa
CHITSAUKO 14 Mhuri Yenyu Inogona Kufara
CHITSAUKO 15 Kunamata Mwari Nenzira Yaanoda
CHITSAUKO 16 Sarudza Kunamata Mwari
CHITSAUKO 17 Chipo Chatakapiwa naMwari Chemunyengetero
CHITSAUKO 18 Ndinofanira Kuzvitsaurira Kuna Mwari Ndobhabhatidzwa Here?
CHITSAUKO 19 Ramba Uri Pedyo naJehovha
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Bhaibheri Rinotidzidzisei?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Bhaibheri Rinotidzidzisei?